Izipho zeKrisimesi zeFektri - China Iikrisimesi zeZipho zabavelisi kunye nabaxhasi
Sele uqalile ukucwangcisa izipho zakho zekrisimesi? Akukaze kube msinya kakhulu ukuba ungene kumoya weholide. Ukukunceda ubhiyozele ixesha leholide, siqokelela ndawonye izipho zethu esizithandayo zeKrisimesi njengoko kubonisiwe apha ukuze ubhekise ngcono kuwe. Njengebhaluni yeKrisimesi, iibhibhile zekrisimesi, izibane zezibane, izinto ezahlukeneyo zekrisimesi yokuhombisa ikhaya lakho, iofisi, iklabhu kunye nevenkile. Njengamaqela eKrisimesi angenangqondo, amabhanti e-slap, iikawusi zeKrisimesi zabantwana bakho abathandekayo, okanye ufumane umnini-fowuni okhethekileyo, isitshixo, izikhonkwane zamalungu osapho, umphathi, abasebenzi, abahlobo kunye nokunye. Ezi zinto zezipho zeKrisimesi ezinqwenelekayo ziqinisekisiwe ukuba zenze iholide yomntu ikhetheke. Akukho sidingo sokujonga naphina kwenye indawo okhoyo ngoku kwaye uthenge uluhlu olubanzi lwezipho ezikhuthazayo zeKrisimesi ezikwi-Intanethi e-Pretty Shiny.
IKrisimesi Silly Bandz
Iibhendi zebhendi yeKrisimesi
Isakhelo seFoto yeKrisimesi
Ndijonge uMhlobiso weKrisimesi
Umhombiso weKrisimesi wePolyresin
Imaski yobuso beKrisimesi
IKrismesi enokubanjwa kweFowuni